Unoda. Uye izvi zvakanaka! Asi pane dambudziko: musikana wako ane waanoda pamurume uyu futi. Zvekuita - kuzvikunda kana kuchengetedza hushamwari? Ngatitsvakei pamwe chete!
Kunyangwe vasikana vangani vachipa mhiko uye vachivimbisa kuti havazombopopotedzana pamusoro pemukomana (mushure mezvose ushamwari zvinonyanya kukosha!), vazhinji vachiri kupedzisira vari mumamiriro ezvinhu aya, ayo, zvinosuwisa, havazi vese vanobudirira kuzviburitsa kubva pasina kurasikirwa, kukakavara uye kukanganisa. Uye zvakaitika sei? Mushure mezvose, kutenderedza gungwa rinotonhorera, uye zvakanyanya kukosha - vakasununguka vakomana, sarudza chero munhu uye unakirwe nehupenyu!
Asi kwete - iwe nemusikana wako makakwanisa kudanana neuyu! Ini ndaimuramba ipapo, asi rudo, iwe unoziva, musikana akapanduka uye anogona kudzora musoro wako kuita dzungu zvekuti unobva wakanganwa nezve mhiko yakapihwa shamwari yako, uye nezvehukama, uye nezve shamwari yako iye. Kunzwa kunopesana nehana, uye ndiani achakunda muhondo iyi - zvinoenderana newe chete.
Pros uye cons - ndechipi chakanyanya kukosha, hushamwari kana rudo?
Unofanira kusarudza ani? Zviri nyore kuraira kune avo vasati vambove mumamiriro akafanana. Kwavari, zviri pachena sezuva kuti zvakafanira kusarudza, pasina mubvunzo, hushamwari. Mushure mezvose, iwe ucharamba uine vakomana vazhinji - unogona kuzviisa mumastacks, asi edza kutsvaga shamwari yakatendeka yaunovimba sezvauri iwe pachako.
Uye ndiani akati une rudo urwu nekusingaperi? Zvakanaka, kutamba nerudo, kusangana kwemwedzi kana miviri, kudzamara mumwe nemumwe wenyu apoteredzwa nechido chitsva, mumwe "nekusingaperi". Pano chete musikana wauchazogovana naye mufaro usingatarisirike anenge asisipo.
Hongu, zvinogona kudaro, asi zvinogona kunge zvakasiyana. Uye kana kudanana nemukomana uyu ikava nguva yakanakisa uye yakanyanya kunaka muhupenyu hwako? Uye nekuda kweiyi nguva yemufaro, hausi kutya kuisa hushamwari hwako panjodzi.
Saka zvinoitika kuti usati waita chimwe chinhu, unofanirwa kunyatsofunga, mukomana uyu akakodzera kutariswa newe here? Zvichida, zvakanaka, iye? Kwete? Ndiye anonyanya kurota muchinda here? Zvakanaka wobva waenda nazvo!
Kurwisa matekiniki - enda kumatanho
Ehe, hapana anoziva izvo zviri mberi uye nzira yekuita nayo. Zvakanaka, pamwe ingori moyo wako. Nekudaro, iwe unogona kuyedza kusimudza keteni mune ramangwana uye uone kuti izvi kana izvo sarudzo zvinogona kuendesa kupi.
Hatisi kuzoviga chokwadi chekuti kana mukomana akanaka ave nyaya yezvaunowanzo farira nemusikana wako, saka haugone kudzivirira hondo yemukati, uye mhedzisiro yehondo iyi inoenderana zvakanyanya nemaitiro ako.
Iwe unogona, chokwadika, edza kuchengeta mapere akadyisa uye makwai kuti agare akachengeteka. Ndokunge, namatira pachivande kune mukomana, asi zviite nenzira yekuti musikana haarare kana mweya. Inogona kushanda, asi kwete kweanopfuura mavhiki mashoma.
Munguva pfupi iye achange achizoziva nezve zvakavanzika zvako zvakavanzika - uyezve kuratidzira hakugone kudzivirirwa. Bvumiranai kuti shamwari chaidzo hadziite izvozvo. Sezvo iwe usati wakagadzirira kumunyengedza neiyi nzira, iva akatendeseka kusvika kumagumo uye utaure zvinangwa zvako zvakananga.
Ino ndiyo nguva yekurangarira mhiko idzo iwe neshamwari yako makaita uye mutaurirane moyo-kumoyo naye. Zvakanaka kana misimboti yako isingazungunuke zvakaenzana mukutarisana nekunzwa kwekudanana. Ipapo zvese zvinogona kugadzikiswa kamwe kana kaviri: panguva imwechete ipa murume mukana kubva pasuwo, uye ndiwo magumo acho. Uye iwe ucharamba uchingoita shamwari newe. Asi zvinogona zvakare kuitika kuti, uchinge waziva nezve ako manzwiro, musikana anozogunun'una pane zvese zvaunofunga, kutsika gasi uye kurasa chimwe chinhu, kubva ipapo mikana yako yekukunda murume uyu inodonha kusvika zero.
Iwe unoziva zvirinani kutendeseka uye anokudzwa shamwari yako, uye kusvika kwaanogona kusvika. Tora mhedziso!
Edza kurova mweya wekukwikwidza unofambisa kufarira kwako mukomana wako, uye ingo kukoshesa kukosha kwazvo kuti iwe umutore. Iwe unemanzwiro echokwadi uye akasimba kwaari here? Zvino hapana mibvunzo.
Nekudaro, kana kwauri izvi ichi chisiri chimwe chinhu kunze kwekumwe kutamba kwekutamba, uye shamwari yako iri musoro pamusoro pezvidakadaka murudo naye, hazvingave zviri nani kuti umupe? Icho chichava chiito chakanakisa pane iwe chikamu, icho chingosimbisa chete hushamwari hwako naye. Uyezve, haurasikirwe nechinhu kubva pane izvi.
Izwi kune mutambi mukuru
Kana kuti pamwe ingo bvunza iye mupomeri wehutsinye iye, kwaasina hanya newe? Zvinogona kuitika kuti dambudziko rako resarudzo richanyangarika roga.
Mushure mezvose, sezvamunoziva, iwe hausi kuzove unomanikidza nechisimba. Kana akafarira musikana wako, zvine basa rei kuedza kumuwana? Mune ino kesi, zvingave zvine hungwaru kutarisisa kutarisisa kune mumwe anokunzwira tsitsi pane kurwira mukomana asina hanya newe, uye kutozviisa panjodzi yekurasa shamwari yako yepamwoyo.
Sezvauri kuona, kune dzakawanda nzira. Iwe unongoda kusarudza iyo inokodzera iwe. Asi panguva imwecheteyo, edza kuva akatendeseka kwauri uye neshamwari yako.
Mhuri yakanaka - inofanira kunge iri yei?
Rudo, godo, kuvimba
Psychology yechirume muhukama nemukadzi: chii chinofanira kutarisirwa?
Kana mukomana akatarisa akananga muziso
Mibvunzo ye52 mu database yakagadzirwa mu 0,417 masekondi.